နေးဗစ် Multiform ဖောင်ဒေးရှင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
နေးဗစ် Multiform ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
တစ်ဦးကနေးဗစ် Multiform Foundation မှတစ်မူထူးခြားသောကိုလည်းမိတ်ဖက်များ၏ပုံစံကိုယူပြီးနိုင်စွမ်းဖောင်ဒေးရှင်း, ယုံကြည်မှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားအခြေခံအုတ်မြစ်က၎င်း၏ဥပဒေရေးရာ entity ဖွဲ့စည်းပုံမှာထိုသို့သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေနိုင်ငံခြားအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများအတွက်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောဥပဒေရေးရာ entity ။ အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအိမ်ခြံမြေ, ကော်ပိုရိတ်စတော့ရှယ်ယာ, ငွေချေးစာချုပ်များ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, ကုန်စည်, ဘဏ်အကောင့်, အနုပညာ collection များကို, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်ဆိုင်မှု, ပင်စင်ရံပုံငွေနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
2004 ၏ Multiform ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Ordinance (လျှော့မှာ "Ordinance"), နေးဗစ်ရိုးအမြစ်ကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရပ်စဲအုပ်ချုပ်။ သင်ဤကမ်းလွန်ရိုးအမြစ်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်နေးဗစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ် နှိုင်းယှဉ်စားပွဲပေါ်မှာ.
နေးဗစ်နှင့်စိန့်န့်ကစ်ကျွန်းများကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အတွင်းအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းရန်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ် 300 နှစ်ကျော်ပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးကျွန်းများ 1983 ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကဗြိတိန်ဓနသဟာယအသင်းအဖွဲ့များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်။
နေးဗစ် Multiform Foundation မှအကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကနေးဗစ် Multiform Foundation မှဤအကြိုးခံစားခှငျ့ကမ်းလှမ်း:
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖြည့်: နိုင်ငံခြားသားများတည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
• စုစုပေါင်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: အမြစ်ကိုမဆိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်အားလုံးအခြားသူများကိုသူတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိက: တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများထဲမှာမဖြစ်ကြောင်းနှင့်စာအုပ်များနှင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများလျှို့ဝှက်ဖြစ်ကြသည်။
• Multiform: ရိုးအမြစ်ကိုပုံမှန်, ယုံကြည်မှု, ကုမ္ပဏီ, ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဖက်ရိုးအမြစ်ဖြစ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
• စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများ: ကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဖက်ဖောင်ဒေးရှင်းပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံပေမည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: ရိုးအမြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်နှင့်နေးဗစ်ဥပဒေများအခြားနိုင်ငံများမှဥပဒေများနှင့်တရားရုံးတွင်တရားစီရင်ပိုင်သို့မဟုတ်အမိန့်မှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: အမြစ်ကိုအစဉ်အဆက်များအတွက်ရေရှည်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအဆောက်အဦများအစဉ်မပြတ်ပူဇော်သက္ကာကိုမိသားစုများဖြစ်နိုင်သည်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: တစ်ဦးကဖောင်ဒေးရှင်းကိုတနေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့နိုင်ပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ် 300 နှစ်ကြာပြီးနောက်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အများပြည်သူက၎င်း၏ဥပဒေရေးရာဝိသေသလက္ခဏာ၏သဘောသဘာဝအတိုင်းရှုပ်ထွေးဖြစ်လာမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်အဆိုပါအမည်စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
ပုံမှန်ရိုးအမြစ်ကိုတက်ကြွစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ သို့သော် passive ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စီးပွားရေးဝင်ငွေရရှိမှုခွင့်ပြုထားပါသည်။
သို့သော် converting တစ်ခုသို့မဟုတ် "ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "မိတ်ဖက်" ကဲ့သို့အခြေခံအုတ်မြစ်၏အခြားပုံစံအဖြစ်မှတ်ပုံတင်သောအခါ, သာမန်ကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဖက်လှုပ်ရှားမှုများအမြတ်အစွန်းအတွက်စေ့စပ်နိုင်ပါသည်။
နေးဗစ်ရိုးအမြစ်ကိုပုံမှန်နေးဗစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးနေးဗစ်မိတ်ဖက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးနေးဗစ် Trust မှဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နေးဗစ်ကုမ္ပဏီဖောင်ဒေးရှင်းမှဖြစ်စေအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
နေးဗစ်ရိုးအမြစ်ကိုတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစာရွက်စာတမ်းများ၏ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်: တည်ထောင်စာချွန်လွှာနှင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ (optional) အင်္ဂလိပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။
•အမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်;
• multiform အခြေခံအုတ်မြစ်ကမွေးစားပါလိမ့်မည်ကြေညာစာတမ်းအရာမူကား,
•ကနဦး subscription ကို (မလိုအပ် $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏အနိမ့်);
• (နေးဗစ်သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်) လျှောက်ထားဘယ်ဟာနိုင်ငံ၏ဥပဒေများ; နှင့်
အတွင်းဝန် - လိုအပ်သောအခန်းကဏ္ဍ။ တဦးတည်းအတွင်းရေးမှူးလိုအပ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသောသူသည်လူတစ်ဦးမဖွစျနိုငျသညျ။
စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ - လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အတွင်းရေးမှူးမဖွစျနိုငျတဲ့သူအနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင်ရှိရမည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များ Ordinance (ပူးတွဲ) ဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည် Multiform Foundations ၏ 17 (5) s ကိုထွက်ထားကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြင့်ဥပဒေများခုနစျပါးအဖွဲ့ဝင်ဦးရေအများဆုံးသည်။
ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ - optional ကို။ ဆန္ဒရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖြင့်ဥပဒေများအောက်တွင် 1-7 အဖွဲ့ဝင်များကရှိနိုင်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဖြစ်နိုင်ပါ။
အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင် (များ) - အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူတဦးတည်းကို (s) ။
တည်ထောင်သူ - အနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ ဒါကအခြေခံအုတ်မြစ်သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတည်ထောင်နှင့်အားမရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ - နေးဗစ်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မပြဌာန်းအခန်းကဏ္ဍ။ စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ညီမျှသည်။
ဘက်တော်သား - နေးဗစ်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မပြဌာန်းအခန်းကဏ္ဍ။ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ညီမျှသည်။
အကျိုးခံစားခွင့် - တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများအတွက်ထူထောင်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အနည်းဆုံးပုံမှန်အားဖြင့်မျှော်လင့်ထားပေမယ့်မသင်မနေရမဟုတ်။
ကာကွယ်ပေးသူ / အုပ်ထိန်းသူ - နေးဗစ်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မပြဌာန်းအခန်းကဏ္ဍ။ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ညီမျှသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူး - နေးဗစ်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မပြဌာန်းအခန်းကဏ္ဍ။
တစ်ဦးကတည်ထောင်သူတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဖန်တီးသူဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့်သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်မည်သည့်နိုင်ငံကနေတရားဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်တည်ထောင်သူ (s) ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တည်ထောင်သူအရေအတွက်ကမကန့်သတ်ရှိပါသည်။
လူတစ်ဦး၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးထက်ပိုမန်နေဂျာလျှင်, စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့တည်ရှိရပါမည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ကနေအကျိုးအမြတ်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက "အကျိုးခံစားခွင့်" ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကမည်သည့်နိုင်ငံကနေသဘာဝအပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ အကျိုးခံစားခွင့်များ၏အရေအတွက်ကိုမကန့်သတ်ရှိပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, တစ်ဦးကိုတည်ထောင်သူလည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်များအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးသည်တဲ့သူတစ်ဦးကကာကွယ်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ပါသည်။ တည်ထောင်၏စာချွန်လွှာတခုကာကွယ်ခန့်အပ်လျော်ကြေးငွေ, ဖယ်ရှား, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အင်အားကြီးသူသို့မဟုတ်သူမအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုလက်ဆောင်ကိုခံယူခြင်းသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုပြုမူစေခြင်းငှါမပြုမီကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ပေးအပါအဝင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိစေခြင်းငှါဘယ်လိုပေးသင့်ပါတယ်။
ရိုးအမြစ်ကိုတရားတို့ကိုသည် "ကော်ပိုရိတ်ကုလားကာ Pierce" ခွင့်ပြုမထားဘူးအဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လျှို့ဝှက်၏တူညီသောကာကွယ်မှုလက်ခံရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အမှီတကဲ '' စာအုပ်များနှင့်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်အခြားအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များလျှို့ဝှက်နှင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြသည်။
တရားတို့ကိုမဟုတ်ဘဲစျေးကြီးနှင့်အချိန်စားသုံးတရားစွဲမှု file ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံခြင်းထက်ဥပဒေရေးရာအငြင်းပွားမှုများ၏ခုံသမာဓိဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တရားတို့ကို $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်နိမ့်ဆုံးကနဦးစာရင်းပေးသွင်းထားရန်လိုအပ်သည်။
ရိုးအမြစ်ကိုနေသမျှကာလပတ်လုံးတည်ထောင်သူ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအရာရှိများနေးဗစ်နေထိုင်သူများမဟုတ်ကြနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနေးဗစ်မှာတည်ရှိပါတယ်ကြသည်မဟုတ်အဖြစ်အားလုံးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်အခြေခံအုတ်မြစ်နာဗိစ်နေထိုင်သူများသို့မဟုတ်နေးဗစ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
ရိုးအမြစ်ကိုဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများကနေရရှိခဲ့ဝင်ငွေထဲကနေ 1% တစ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းဘာသာရပ်တစ်ခုနေထိုင်သူအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ထို option ရှိသည်။
အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုကျင်းပနိုင်သည့်နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ရှိရပါမည်။ ထို့အပြင်အစည်းအဝေးတယ်လီဖုန်း, video conferencing, သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, လျှို့ဝှက်နှင့် privacy မရှိအခွန်ငွေ, ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်မျိုးစုံဖွဲ့စည်းမှုမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်အင်္ဂလိပ်: A နာဗိစ် Multiform Foundation မှဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။